Gaudí - Casa Batllóကဲ့သို့သူ၏ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောအလုပ်များခရီးစဉ် Absolut ခရီးသွား
Susana godoy | 31/05/2021 09:10 | Espana
Antoni Gaudíသည်ဗိသုကာကြီးများနှင့်စပိန်ခေတ်သစ်၏အမြင့်ဆုံးကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့်သူသည်သူ၏အမှုတော်များကို ဆက်လက်၍ ၀ မ်းသာနိုင်ရန်အတွက်သင်ယနေ့သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်သည့်အမွေများစွာကိုချန်ထားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာ Casa Batllóဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့တွင်အခြားသူများစွာရှိပြီးသိရန်သို့မဟုတ်အနည်းငယ်နီးကပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည် ပါရမီ၏အထင်ရှားဆုံးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်အကျင့်ကိုကျင့်အချို့မှတဆင့်ကို virtual ခရီး။ ထိုသူအားလုံးတို့သည်ထူးခြားသောရလဒ်တစ်ခုကိုရရှိစေသောထိုပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ ယင်းကိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးခေတ်မီမှုအဖြစ်လူသိများသောအရာ။ ငါတို့ခရီးသွားမယ်ဆိုတော့ထုပ်ပိုးမယ်။
1 Antoni Gaudíမှ Sagrada Familia
3 Guell ပန်းခြံ
4 Vicens အိမ်
5 Gaudí၏ Capricho
Antoni Gaudíမှ Sagrada Familia
ဘာစီလိုနာတွင်တည်ရှိသောဘေလီစလီကာမှာအလည်အပတ်အများဆုံးလည်ပတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၁၈၈၂ တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအမြင့်ဆုံးသောအသင်းတော်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၌များပြားသော်လည်းသူ၏ကြီးမားသောလက်ရာဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ပြောနိုင်သည်။ ၎င်းသည်သူ၏ဘဝကိုနှစ်ပေါင်းများစွာသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်၎င်းနှင့်အတူသူသည်သဘာဝခေတ်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်၊ သူ၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏နောက်ဆုံးအဆင့်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အထက်ဖော်ပြပါအရာအားလုံး၏အကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သည်။ Neo-Gothic ရှိ crypt အစိတ်အပိုင်း မှလွဲ၍ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော်၏အကြီးဆုံးကိုအော်ဂဲနစ်ပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ဂျီ ometric မေတြီပုံသဏ္apesာန်များမလုံလောက်နိုင်သကဲ့သို့သဘာဝနှင့်ဆင်တူမှုလည်းမရှိနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင်ထိုအရာကိုမလည်ပတ်ရသေးလျှင်၊ Antoni Gaudí!
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘာစီလိုနာရှိ Paseo de Gracia တွင်တည်ရှိသောအဆောက်အအုံကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအကြောင်းပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်Gaudí၏သဘာဝခေတ်တွင်ရောက်ရှိနေပြီးသူသည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်စတိုင်ကိုအပြည့်အဝစုံလင်စေပြီးသူ၏လှုံ့ဆော်မှုသည်သဘာဝမှလာခြင်းဖြစ်သည်။ ပြောပြီး Casa Batllóသို့လည်ပတ်ခြင်းသည်သင်၏အာရုံများအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ကောင်းပြီ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအလည်အပတ်ခရီးဟာတုန့်ပြန်မှုကောင်းနိုင်ခြင်း၊ တစ်နည်းပြောရရင်တော့Gaudíရဲ့ကမ္ဘာထဲကိုသင်ကိုယ်တိုင်ပေါင်းစည်းနိုင်ခြင်း၊ သူမြင်တာကိုမြင်ခြင်းဒါမှမဟုတ်သူဟာခံစားချက်တွေကိုခံစားကြည့်နိုင်တဲ့ရုပ်မြင်သံကြားပြပွဲကတဆင့်။ သူ၏ထူးခြားသောအတွေ့အကြုံသည်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုနိုင်သည့်သူ၏လှုံ့ဆော်မှုသည်အဘယ်သို့၊ ပါရမီရှင်၏ထိုစိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုဖန်တီးခဲ့ပုံနှင့်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအရာအားလုံးကဲ့သို့ဖြစ်သည်။
ဤလည်ပတ်မှုတွင်သင်ဤအရာအားလုံးကိုတုံ့ပြန်လိမ့်မည်။ သင်မျက်နှာပြင်တစ်ထောင်ကျော်ကိုခံစားနိုင်မည့်စွဲငြိဖွယ်ရာအခန်းကိုတွေ့လိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်။ သူတို့ကို၌ Gaudí Dome မှာတွေ့ရတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအားလုံးကိုခင်ဗျားတွေ့လိမ့်မယ်။။ မြင်နိုင်ရုံသာမကဘဲအကောင်းဆုံးအသံများသည်သဘာဝတရား၏စိတ်ဓာတ်ကိုဖမ်းယူနိုင်သည့်အသံလိုင်း ၂၁ ခုနှင့်မှော်အစစ်အမှန်ထက်ပိုမိုများပြားမည့်အသံအနိမ့်အမြင့်စီမံချက်များကြောင့်သင့်ကိုဝန်းရံလိမ့်မည်။
အစသို့မဟုတ်မူလအစကိုခံစားပြီးနောက်၊ ဂေါဒီ၏စိတ်ကိုလည်းဝင်ရန်အချိန်ရောက်လာပြီ။ တကယ်ရှုပ်ထွေးပုံရသောအရာ! သို့သော်Gaudí Cube နှင့်အတူကအောင်မြင်လိမ့်မည်။ ၆ ဖက်မြင် LED Cube ပါသောအခန်းတစ်ခန်း။ ၎င်းနှင့်အတူသင်အမှန်တရား၏အမြင်အားလုံးကိုပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်သင့်ကိုအခြားကမ္ဘာသို့စိတ်ကူးယဉ်တစ်ခုသို့ခေါ်ဆောင်သွားလိမ့်မည်၊ သို့သော်အမြဲတမ်းမင်းကအာရုံအားလုံးနှင့်သင့်ကိုကူညီပေးသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဒီအဘို့, နောက်ကွယ်မှပြည့်စုံသောသုတေသနအလုပ်ရှိခဲ့သည်။ ပန်းချီကားများ၊ ဓာတ်ပုံများနှင့်အခြားပစ္စည်းများကိုဖန်တီးထားသည့်အနုပညာအကူအညီဖြင့်ဤစီမံကိန်းကိုအသက်ဝင်စေခဲ့သည်။။ သူ၏မျက်လုံးများနှင့်ကမ္ဘာကိုသူစွန့်ခွာစေသောအမှတ်အသားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရမည်။
ဘယ်အချိန်မှာဝင်လာတာလဲ Batllóအိမ်ငါတို့အချို့ပျော်မွေ့ကြလိမ့်မည် သူ့ဘ ၀ ၏ပုံရိပ်များ၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်များ၏ပုံရိပ်များနှင့်ဤအရာအားလုံးသည်သူ၏အချိန်ကိုသွားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အသစ်အဆန်းတစ်ခုမှာပန်းချီကားတစ်ချပ်ကိုချဉ်းကပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းတို့တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်ရွေ့လျားမှုအာရုံခံကိရိယာများသည်သေးငယ်သောရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုများကိုစတင်မည်ဖြစ်ရာအိမ်နှင့်မိသားစု၏အဓိကအကြောင်းအချက်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်။ သူ၏အမွေများအားလုံးကိုပျော်ရွှင်စွာအဆုံးသတ်နိုင်ရန်အတွက်ပထမလူတစ် ဦး အနေဖြင့်၊ တစ်သက်တာတွင်အနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်နေထိုင်ခဲ့ရမည့်မှော်အတွေ့အကြုံတစ်ခုရရှိရန်။ သငျသညျ၎င်း၏အံ့အားသင့်စရာရှာဖွေတွေ့ရှိဝံ့သလား
ဘာစီလိုနာ၏အနောက်မြောက်ဘက်၊ ကရမေလိုတောင်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည် Park Güellသည်Gaudí၏အကျော်ကြားဆုံးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ့ကိုတွေ့သောအခါသူသည်သဘာဝခေတ်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးသူကိုယ်တိုင်အလွန်စတိုင်ကျစွာနေထိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ဘာစီလိုနာကိုမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းကိုခံစားနိုင်မည့်နေရာမှ၎င်းသည် San Salvador de Horta စမ်းရေတွင်းသို့မဟုတ် Joan Sales ရှုထောင့်စသည့်အထူးအထူးထောင့်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ ၀ င်ပေါက်ဒါမှမဟုတ်တဲကန္တာရထဲမှာပဲရှိပြီးသားပါရမီရှင်တွေရဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနိုင်ပါပြီ။ အခြားနေရာများသို့လည်းသွားရောက်လည်ပတ်သင့်ပြီးသင်ပြုလုပ်ပြီးပါကaroundရိယာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းသည်ဘယ်တော့မျှထိခိုက်မည်မဟုတ်ပါ။
ဗိသုကာ၏စီမံကိန်းအားလုံးသည်သူတို့၏နောက်ကွယ်တွင်သူတို့၏အရေးပါမှုနှင့်အောင်မြင်မှုရှိသော်လည်းဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါ Casa Vicens, ငါတို့ကဒီဗိသုကာပညာလေ့လာပြီးနောက်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုံးအလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာဖော်ပြရတယ်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်လျှင်၎င်းသည် ပို၍ ပင်တန်ဖိုးရှိသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်အရှေ့တိုင်းခေတ်တွင်၎င်းနေရာကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီအရှေ့မျက်နှာစုတ်တံတွေကြောင့်Gaudíသည်သူ၏အစောပိုင်းနှစ်များ၌အလွန်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့သည်။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာစိတ် ၀ င်စားမှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာတစ်ခုအဖြစ်ကြေငြာခဲ့သည်။ အဆောက်အအုံ၏ကြွေထည်အပြီးတွင်ကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြင့်မျက်နှာစာ၏အရောင်များကိုကျွန်ုပ်တို့အရောင်များဖြင့်ချန်ထားခဲ့သည်။
သူ၏အမှုတော်အများစုသည် Catalonia တွင်တည်ရှိသည်မှာမှန်သော်လည်းဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့ပြောရန်ရှိသည် Cantabria ရှိ Comillas သို့သွားသော 'စိတ်ကူးသည်။ Gaudí၏အရှေ့ပိုင်းတွင်လည်းသတ္တုကြွေပြားများသည်အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သောမုတ်များနှင့်အုတ်များဖြစ်သည်။ သင်သိသည်နှင့်အမျှဤအဆောက်အအုံကိုပြတိုက်အဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ မျက်နှာအသွင်အပြင်ကိုကြည့်ရုံဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းမည်။
El Capricho နဲ့တံခါးကိုငါတို့ဖွင့်လိုက်တာနဲ့အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ် အဆိုပါ Casa Botines ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါက Catalonia အပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့Leónမှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေနောက်တစ်ခုပါ။ ခေတ်သစ်မူရင်းဇစ်မြစ်သည်၎င်းသည်ဂိုဒေါင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်း၏ပထမဆုံးနှစ်တာကာလအတွင်းနေထိုင်ရာအရပ်ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၉ တွင်သမိုင်းဝင်အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အအုံအဖြစ်ကြေငြာခဲ့ပြီး ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ယနေ့တွင်ပြတိုက်တစ်ခုတည်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်၏ဂုဏ်အသရေ၊ ဂေါ်ဒီ၏အနှစ်သာရနှင့်သူ၏ပါရမီ၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ မင်းဘယ်သူတွေလည်ပတ်ခဲ့တာလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » Casa Batllóနှင့်သင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သောပါရမီရှင်Gaudí၏အခြားကြီးကျယ်ခမ်းနားသောလုပ်ရပ်များ